Zụta ngwugwu ngwugwu YouTube - YTpals
1 Ọkọlọtọ ọkọlọtọ $ 60
Emere ngwugwu ngwugwu iji jikọta ọrụ niile ị kwesịrị ịzụrụ ọnụ maka nsonaazụ kacha mma na ego efu.
Dịka ọmụmaatụ, kama ịzụrụ echiche 5,000, ị ga-enweta arụmọrụ kachasị mma na nsonaazụ pụtapụtara mgbe ịzụrụ ihe 400 amasị, 2000 mbak na ihe 40.
Anyị na-ejikọta ọrụ ziri ezi iji nye gị nsonaazụ kacha mma.
Ndị kacha ewu ewu na ngwugwu ndibiat bụ "5000 Echiche ngwugwu." Nke a nwere ike-agbasa gafee 1 ka 5 videos kacha.
Agbanyeghị, ngwugwu anyị na-akwado ọ bụla iji zụta bụ na "Channel & Video Optimization Package Deals" a na-akpọ ya "Channel Channel Optimization Package."
Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe ịga nke ọma gị na YouTube, ị ga-ebuli nnukwu mbuli elu site na ịhapụ anyị ka ị mata ọwa gị, gwa gị ihe ị kwesịrị ịgbanwe ma nye gị ọkachamara ndị ọkachamara iji nye ọwa gị ụdị "nnukwu oge YouTuber"